Nweta ndebiri ndebiri maka Photoshop naanị otu euro | Esi m mac
Na oge omuma na nkwukọrịta nke oge a, data na akụkọ "tinye n'anya anyị". Ndị ọrụ preferntanetị na-ahọrọ ụdị ọdịdị dị iche iche na paragraf dị ogologo nke ederede na-enweghị ihe ọ bụla karịa nchịkọta na-agwụ ike nke data, nke ahụ bụ mgbe ihe ọmụma na-abanye, ụdị ọhụrụ (n'ezie, ọ bụghị nke ọhụrụ) gosiputa ihe omuma a na uzo ihe di egwu na nke ohuru, na-akpọte mmasị nke onye nnabata na uru bara uru nke ịdị mfe nke mgbasa ya: n'ụzọ bụ isi, infographics, ịbụ onyonyo, dị mfe ịkekọrịta na netwọkụ mmekọrịta.
Yabụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ, ndị ọkachamara sitere n'ọhịa dị iche iche, ndị nta akụkọ, wdg, na-eji infographics na-enye data bara ọgaranya ma na-agwụ ike na ụzọ a na-ahụ anya, nke ziri ezi ma na-atọ ụtọ. Mana oge ụfọdụ, ilekwasị anya n ’imebe ihe na-efu oge na akụrụngwa nke ọ bụghị mmadụ niile nwere ike imeli na ọ bụghị mmadụ niile dị njikere ime. Yabụ, ka inwee ike mepụta ihe omuma ihe omuma site na itinye uche na ọdịnaya karia imeweTaa, anyị na-ewetara gị ọmarịcha onyinye a gụnyere ngwugwu nwere ndebiri ogo ogo ogo elu dị njikere iji ya na Photoshop.
Chọọ ozi na imewe na ndebiri Ozi Infographics Mill
Dị ka ụbọchị Tuesday ọ bụla, a bịara m iwetara gị nke mbụ n'ime onyinye abụọ a na-enye kwa izu na, yana oge a kara aka na Britain, mgbasa ozi "Mac App Store Sales" na-enye anyị, ngwa bara ezigbo uru ma dị elu, yana ego gafere pasent iri itoolu. Oge nke a bụ ihe Infographics Mill - ndebiri maka Adobe Photoshop, otu nchịkọta nke ihe karịrị 40 ọkachamara, eluigwe na ala na ndị bara uru ndebiri nke Graphic Node kere site na ya ka ị nwee ike iji Adobe Photoshop mepụta ihe omuma ihe omuma nke oma.
Ọ bụghị oge mbụ anyị na-egosi gị nchịkọta nke ndebiri maka onye iBooks Author, maka Pages, iji mepụta CV ndị ọkachamara, were gabazie. Dị ka ọ dị na mbụ, Ozi Infographics Mill na-apụ apụ maka ịchụ àjà Nlekọta ihe omuma ihe eji eme nma nke ndi okacha amara mebere, nke ị ga-eji were nyefee data na ozi n’ụzọ dị nkenke ma dị irè karị.
Nchịkọta ahụ na-enye a dịgasị iche iche nke ndebiri, yabụ ị nwere ike iji ha n’isiokwu dị iche iche, site n’iri ike mmadụ, ahụike ndị mmadụ na ndị ọzọ. Ọzọkwa, ha dị dị mfe iji Ọfọn, ị ga-agbanwe naanị ozi ị ga-egosipụta, nke ga-azọpụta gị oge dị ukwuu.
Ọnụ ego ya dị ihe dị ka euro iri, agbanyeghị, ị ga - enweta Infographics Mill maka naanị € 1,09 ruo echi Wenezde June 14. Cheta na ịchọrọ Adobe Photoshop maka Mac iji nwee ike iji ha.
GN Infographics maka Adobe Photoshop - Ndebiri10,99
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Nweta ndebiri ndebiri maka Photoshop naanị otu euro
qCharge: chaja ọhụrụ maka Apple Watch gị na mkpọsa “Crowfunding”